Astaanta Sawirka: Paul Virtucio
$12.6 Million Initiative waxay bixisaa maalgelin cusub oo loogu talagalay Madowga, Asaliga, Latinx, iyo Aasiyaanka Mareykanka ee Hogaamiya Fanka.
(Maajo 18, 2021 - Minneapolis, Minn.) - $12.6 milyan oo hindise goboleed ah Qasnadaha Dhaqanka Mareykanka waxay siin doontaa maalgelin cusub ururada farshaxanka ee ay hogaamiso Madowga, Asaliga, Latinx, iyo Aasiya Ameerika. Maalgelinta, oo loo qaybin doono laba waji, waxaa suurtageliyay iskaashiga McKnight, Ford, Bush iyo Jerome Foundations.
Wajiga 1aad: Khasnadaha Dhaqanka ee Gobolka
$7 milyan, oo ay bixiyeen aasaaska Ford & McKnight
Marxaladda koowaad, toban urur faneed ee gobolka Minnesota - loogu talagalay Qasnadaha Dhaqanka Gobolka - doonis kasta helid deeqaha aan xadidnayn ugu yaraan $500,000, in loo qaybiyo ah shanta sano ee soo socota ama ka badan. The Qasnadaha Dhaqanka Gobolka barnaamijka maamuus ururada sameeyey si asaamayn weyn ku leh muuqaalka dhaqanka tobanaan sano. Tobanka ururadu waa:
Barnaamijka Farshaxanka Ururka Guriyeynta Bulshada ee American Indian
Ananya Tiyaatarka Qoob ka ciyaarka
Rootska asaliga ah
Wax badan ka baro ururada
Waxaan ereyga 'Khasnadaha Dhaqanka' ugu adeegsannaa ujeedo, inaan ku sharfno kala duwanaanshaha muujinta iyo farshaxanimo heer sare ee ay ururadani gacan ka geystaan muhiimadda dhaqameed ee gobolkeenna, in kasta oo ay taariikh ahaan soo mareen maalgashi yar, ”ayay tiri Tonya Allen, oo madax ka ah Machadka McKnight. Maaddaama machadyadayada farshaxannadu ay u diyaargaroobayaan inay si ammaan ah dib ugu furaan aafada ka dib, waxaan ku faraxsanahay inaan toosh ugu ifinno kuwan cajiib ah ururada. ”
The shuruudaha soo socda ogeysiiyay xulasho oo ka mid ah tobanka Dhaqan ee Gobolka:
Gobol ahaan loo aqoonsan yahay socodsiinta iyo joogtaynta dhaqanka / bilicsanaanta dhaqanka ee ku xididaysan bulshada midabka leh;
Gobol ahaan, qaran ahaan ama caalami ahaan waxaa loo aqoonsan yahay heer sare xagga farshaxanka / dhaqanka;
Waxay leedahay dhaxal muhiim ah oo saameyn ah in kabadan hal sano;
Waxay u adeegtaa goob tababar oo loogu talagalay jiilalka guuleysta ee farshaxanada iyo hoggaamiyeyaasha dhaqanka;
Waxaa loo aqoonsaday xarun muhiim u ah shabakad ballaaran oo ururada isbahaysiga ah ama dadaallada;
Waxay gacan ka geysataa himilada McKnight Foundation si loo hormariyo cadaalad, hal abuur, iyo mustaqbal aad u tiro badan oo ay dadku iyo adduunyadu ku barwaaqoobaan.
Minneapolis Foundation ayaa maamuli doonta deeqaha Dhaqannada Gobolka.
Wejiga 2aad: Kala-soocidda Khasnadaha Dhaqanka
$5.6 milyan waxaa bixiyay Ford, McKnight, Bush iyo Jerome Foundations
Wejiga labaad, tisagu Kala soocida Khasnadaha Dhaqanka barnaamijka abaalmarin doonaa deeqaha si ay u koraan mustaqbalka madow, Asal ahaan, Latinx, iyo Aasiyaan Ameerikaan ah fanaaniinta iyo dhaqan ururada ka jira Minnesota, North Dakota, South Dakota, iyo 23 Umada Dhaladka ah ee isku joqoraafiga ah.
“Waxaan aaminsanahay in taageerida la aasaasay Madow, Asal ahaan, Latinx, iyo Aasiyaan Mareykanku hogaaminayo ururro leh diiwaanno raadraac leh oo wanaagsan, iyo sidoo kale shaqsiyaad farshaxanno ah iyo ururro da 'yar, ayaa ka dhigi doona bulshooyinkeenna goobo wanaagsan oo lagu noolaado, "ayay tiri DeAnna Cummings, oo ah agaasimaha barnaamijka farshaxanka McKnight “Waxaan sidoo kale rajeyneynaa in maalgalintani ay horseed u noqon doonto aqoonsi ballaaran iyo maalgashi koror ah oo laga sameeyo ururradan farshaxanka muhiimka u ah iyo hoggaamiyeyaashooda la kulmaya xilligan male-awaalka, adkeysiga, iyo hal-abuurka. ”
Propel Aan macaash doon ahayn iyo Golaha Farshaxanka Gobolka Metropolitan ayaa maamuli doona barnaamijka, ka qayb qaadashada fanaaniinta iyo daneeyayaasha bulshada inay wax wada abuuraan waa. Wada-hawlgalayaashani waxay wadaagi doonaan macluumaad dheeri ah 2021-ka wixii ku saabsan sida loo dalbado maalgelin.
Maalgeliyeyaashu Waxay Midoobeen Taageerada Farshaxanka
Hay'adda 'Ford Foundation' waxay billowday Qasnadaha Dhaqanka ee Mareykanka deyrtii 2020, iyagoo raadinaya la-hawlgalayaasha maalgelinta gobollada dalka oo dhan si ay ula jaanqaado tabaruceeda. Gobolka Minnesota, Machadka McKnight wuu kajawaabay wicitaankaas inay u adeegaan sidii lammaane hogaamineed oo heer gobol ah waxayna iswaafajiyeen tabarucaadkii ugu horreeyay ee $5 milyan oo ka socda Ford Foundation. Aasaaska Bush iyo Jerome waxay ku darsadeen $2.6 milyan oo dheeri ah si ay u keenaan sanduuqa $12.6 milyan. Labada barnaamijba waxay casuumayaan wada-hawlgalayaal maalgelin dheeri ah si loo kordhiyo ilaha farshaxanka iyo dhaqanka ku xididaysan bulshooyinka midabbada leh ee gobolkeenna.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan la shuraakowno McKnight, Bush, iyo Jerome Foundations si aan ugu dabaaldegno ururada farshaxanka ee ku soo kordhinaya taajirnimada iyo kala duwanaanta dharka dhaqanka Mareykanka," ayuu yiri Darren Walker, madaxweynaha Ford Foundation. Khasnadahaani waxay astaan u yihiin heer sarre ee ka jira Black, Indigenous, Latinx, iyo ururada farshaxanka ee ay hogaaminayaan Aasiya Ameerika waxaana rajeyneynaa inaan dhiirigelino maalgashiga sii socda ee bulshada midabada leh sanadaha soo socda. ”
Soo degso war-saxaafadeedka oo dhammaystiran
Mawduuca: Fanka & Dhaqanka, Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada